Isbedelka Cimilada ayaa silsiladda cuntada ka dhigaysa mid aan waxtar badan yeelan doonin | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimilada wuxuu saameyn xun ku leeyahay noolaha, keymaha, aadanaha iyo, guud ahaan, kheyraadka dabiiciga. Waxay saameyn ku yeelan kartaa qaab toos ah xaalufinta ama sii xumeynta kheyraadka ama si dadban iyada oo loo marayo silsiladda cuntada.
Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa saameynta isbeddelka cimilada ee silsiladda cuntada. Sidee isbeddelka cimiladu u saameeyaa silsiladda cuntada iyo annaga?
1 Baro silsiladda cuntada
2 Kuwa ugu badan ee ay saameysay isbadalka cimilada
Baro silsiladda cuntada
Cilmi baaris ayaa lagu sameeyay Jaamacadda Adelaide taasoo lagu ogaaday in isbedelka cimilada waxay yareysaa waxtarka silsiladda cuntada maxaa yeelay xayawaanku waxay yareeyaan awooddooda inay ka faa’iideystaan ​​kheyraadka. Cilmi baarista ayaa carabka ku adkeysay in kororka CO2 uu mas'uul ka yahay asiidh siinta waana kororkaan kan kordhin doona wax soo saarka qeybaha kala duwan ee silsiladda.
Marka laga soo tago daahfurkaan, waxay kaloo go'aamisay in kororka heerkulka biyuhu uu baajin doono wax soo saarka qaybaha kale ee silsiladda cuntada. Tan waxaa u sabab ah culeyska ka soo gaaray xoolaha nool. Taasi waa sababta ay dhibaatooyin yar yar uga dhici doonaan silsiladda cuntada taas ayaa sababi doonta burburinteeda.
Burburka silsiladda cuntada waxay ku yeelan kartaa cawaaqib xumo nidaamyada deegaanka badda, maxaa yeelay mustaqbalka baddu waxay bixin doontaa kalluun ka yar kan ay dadku cunaan iyo xayawaanka badda ee ku jira qaybta ugu sarreysa silsiladda.
Kuwa ugu badan ee ay saameysay isbadalka cimilada
Si loo arko saameynta isbeddelka cimilada ee silsiladda cuntada, cilmi-baaristu waxay dib u soo ceshatay silsiladihii cuntada ee ugu habboonaa, laga bilaabo dhirta u baahan iftiinka iyo nafaqooyinka si ay u koraan, xayawaan yaryar iyo qaar ka mid ah kalluunka ugaarsada. Jilitaanka, silsiladdan raashinka ah waxaa lagu soo bandhigay heerarka aashitada iyo kuleylka oo la mid ah kuwii la filayay dhammaadka qarniga. Natiijooyinka waxay ahaayeen in uruurinta sare ee kaarboon laba ogsaydhka ay kor u qaadday koritaanka dhirta. Inbadan oo dhir ah, kuwa roobaadka yar yar iyo kuwa kadambeeya, kalluunka si dhakhso leh ayuu u kori karaa.
Si kastaba ha noqotee, kor u kaca heerkulka joogtada ah ee biyaha ayaa sababa kalluunka ayaa ah kuwa aan waxtarka lahayn wax cun sidaa darteed ma ka faa’iideysan karaan tamarta dheeriga ah ee ay dhirtu soo saarto. Taasi waa sababta kalluunku u gaajoodo oo kolba heer kulka uu kordho waxay bilaabaan inay yareeyaan waxa ay ugaadhsanayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Isbedelka cimilada ayaa silsiladda cuntada ka dhigaysa mid aan waxtar badan yeelanayn